John Wayne: Inona no nanjo ny Revolver, holster rig, Gazety Life 1972?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » John Wayne: Inona no nanjo ny Revolver, holster rig, Gazety Life 1972?
Entertainment • Films • fampiasam-bola • Vaovao • People • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
John Wayne Colt Revolver
Volavola fananan'i John Wayne ary ampiasain'ny kintana tandrefana amin'ny sarimihetsika marobe no namidy $ 517,500 XNUMX tany amin'ny Rock Island Auction Company (RIAC). Ny basy enina an'ny Colt tamin'ny voalohany dia nahazo tombam-bidy ambany kokoa avy amin'ny orinasa lavanty, saingy taorian'ny nametrahana porofo mivantana dia nitombo haingana ny fahalianana teo amin'ireo mpanangona.
Ny revolisiona an'ny Colt Single Action Army dia hitan'i Wayne ampiasain'ny sarimihetsika toy izany True Grit, Rooster Cogburn, ary Ireo Cowboys, Ankoatra ny hafa.
Anisan'izany ilay revolver dia ny rig misy an'i Wayne, antontan-taratasy marobe manamarina ary kopian'ny 1972 fiainana gazety
Ny Life Magazine dia nanana an'i Wayne teo amin'ny fonony izay nitafy ny rig sy ny basy.
"Ny tsenan'ny fanangonana dia miaina fitomboana lehibe amin'ny karazany maro," hoy ny hevitry ny filohan'ny RIAC, Kevin Hogan. “Rehefa atambatra ny roa amin'ireny karazan-kazo ireny, ny Hollywood memorabilia sy ny basy de collector, dia tena afaka manasa fifaninanana mafana. Faly be izahay ny mpandefa anay ary faly izahay matoky ny mpividy fa hanamarina ireo entana mahafinaritra ireo. ”
Ny fitomboan'ny tsenan'ny fitaovam-piadiana dia man taratra hatrany ny isan'ny varotra hita amin'ny sehatry ny varotra. Ny lavanty nanolorana an'i revolver an'i Colt revolver an'i Wayne dia nampiana amin'ny kalandrie RIAC hihaonana amin'ny fitomboan'ny fangatahana. Ny hetsika nandritra ny 3 andro dia nahitana basy fanangonana maherin'ny 7,000 miampy artifakta miaramila, kojakoja, sangan'asa ary nahatratra 8 tapitrisa dolara mahery.
Tarehimarika farany momba ny fifamoivoizana ao amin'ny seranam-piaramanidina Fraport ho an'ny volana septambra ...
Ny fahaverezan'asa amin'ny fizahan-tany any North Queensland dia hitombo amin'ny ...
Mandra-pahoviana ny fandoavana ny karama farany aminao?
Mpizahatany miala sasatra amerikana mijanona an-trano toy ny tranga COVID-19 ...
Hafatra maika: Facebook, WhatsApp, Instagram midina ...
Global Center Resilience Center dia nanolo-tena ho amin'ny fanarenana ...
Kitapo miova fo vita amin'ny lasantsy ONYX mamela hanapaka ...
Vaksinin'ny COVID-19 vaovao eo am-panaovana azy: Tsy misy vokany ratsy!
Seychelles dia mandray ny hazavana maintso izao avy any Italia
Marriott amin'ny misiona miaraka amin'ny Hotely vaovao any India ...
Niverina tany amin'ny minisiteran'ny fizahantany sy fiaramanidina Bahamas ny ...
Ny St. Regis San Francisco dia manonona anarana ho mpitantana jeneraly vaovao